Waa maxay xumbada dhaqaale? | Dhaqaalaha
Jose recio | | Crisis, Dhaqaalaha guud
Mid ka mid ah xaaladaha ay maalgashadayaashu aad uga cabsadaan ayaa ah waxa loogu yeero xumbo dhaqaale. Layaab ma leh, waa hawl horseedaysa muhiim quusin ee suuqyada dakhliga isbedela Maahan kuwo soo noqnoqda, laakiin markay soo baxaan wax ikhtiyaar ah uma lihid inaad ka maqnaatid booska boorsadaada. Goynta qiimaha saamiyada waa kuwo aad u kacsan waxayna hoos ugu dhici karaan heerarka ugu yar. Heer ay ka faa’iideysan karaan maalgashadayaasha mala-awaalka ah.
Si kastaba ha noqotee, dhammaan maal-gashadayaasha yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ahi ma oga macnaheeda runta ah. Hagaag, si aad hada sifiican ugahesho wixii hada kadambeeya, waa inaad ogaataa in xumbo dhaqaale, oo sidoo kale looyaqaano dhaqaale, ay tahay a actuation sarrifka saamiyada taasi waxay dhacdaa marka saameyn culus ku yeelato suuqyada maaliyadeed. Si kastaba ha noqotee, tanina waa mid aad u daran, goobooyinku waxay u muuqdaan xitaa iyada oo aan la hubin oo aan lahayn xaalado mala-awaal ah. In kasta oo xaaladaha dambe ay yihiin kuwo aad u adag oo lagu ogaan karo wakiillada maaliyadeed ee kala duwan.
Arrin kale oo ay tahay inaad hadda ogaato ayaa ah in ifafaalahaan dhaqaale uu ku soo badanayo hababka isuduwidda qiimaha. Wax si fiican loo fahmay sida kiiska gaarka ah ee waxa loogu yeero xumbada guryaha, oo xasaasi u ah Spain sannadihii la soo dhaafay. Dhinaca kale, waa milicsiga soo ifbaxaya iyadoo ay sabab u tahay xilli sharaf ama koboc dhaqaale. Muddo fiditaan dhaqaale ka dib waxay had iyo jeer ka horreysaa dhacdada aan kaga hadlayno qodobkaan.
1 Xumbada: waxay ku dhammaan kartaa dildilaac
2 Sidee loo ogaadaa dillaaca?
3 Saamaynta dhaqdhaqaaqyadan
4 Sharciga saadka iyo baahida
5 Isbedelada suuqa
6 Sababaha kale ee muuqaalkiisa
Xumbada: waxay ku dhammaan kartaa dildilaac
Xaqiiqda aadka u xiisaha badan ee ku saabsan xumbada dhaqaalaha ayaa ah inay ku dhammaan karto shil dhaqaale oo baabi'in kara tiro badan oo hanti ah dal. Sida dhacday sanadihii la soo dhaafay iyadoo Niyad jab weyn ee sanadihii 1930-naadkii iyo xumbada guryaha ee Japan sanadkii 1990. Kuwani waa tusaalooyin sharxaya si aad u wanaagsan dhaq-dhaqaaqan maaliyadeed ee ka welwelinaya maalgashadayaasha aad u badan. Sababaha kale awgood maxaa yeelay waxay ku waayi karaan lacag aad u badan hawlgaladooda suuqa saamiyada. Marka laga soo tago tixgelinta kale ee farsamada iyo xitaa aragtida aasaasiga ah ee aragtida suuqyada maaliyadeed.
Marka laga hadlayo dabeecadooda, waxay leeyihiin habab kala duwan taasna waxaa lagu soo saaray qaybta soo socota ee aan kuu tilmaameyno: caqli gal ah, mid gaar ah oo xitaa ugu yeeraa sida faafa. Inkasta oo kan dambe uu leeyahay waxyaabo badan oo nafsi ah oo ka sarreeya habab kale oo dhaqaale. Waa lagu gartaa maxaa yeelay xaqiiqadan waxaa ka horeeya marxalad xasaasi ah. Halka iibsadayaashu bilaabaan inay yaryihiin, maalgashadayaasha qaarna waxay bilaabaan inay iibiyaan boosaskooda suuqyada maaliyadeed. Si aad ugu dambaysid faafitaanka laga baqo ama muddo aad u garaneyso si ka wanaagsan sida shilka, in kastoo xusuus xun ay ku leeyihiin maalgashadayaasha.
Sidee loo ogaadaa dillaaca?
Markii la abuuro waxa loogu yeero xumbo dhaqaale waxaa jira calaamado taxane ah oo muujinaya in aan la kulanno xaaladdan jilicsan ee dhaqaalaha waddan ama adduunkaba. Way fududahay in la aqoonsado wax walbana waxay ku saleysan tahay calaamadaha soo socda ee aan hoos kuugu soo bandhigeyno si aad wax yar uga sii caddeyso dhaq dhaqaaqan dhaqaale ee gaarka ah.
Guud dhicitaan ee suuqyada sinnaanta, oo leh heerar aad u kacsan oo ay weheliyaan qandaraas heer sare ah. Toddobaadyo gudahood, qiimaha saamiyada ayaa si weyn hoos loogu dhigay.
El isticmaalka wuu yaraadaa gaar ahaan heer ay khatar gelin karto dhaqaalaha dal ama deegaan juqraafiyeed. Isticmaalayaasha ayaa lacag yar ku bixiya iibsashada alaabada adeegga, waxay ka qaataan amaahda guryaha oo yar waxayna ku bixiyaan lacag yar iibsigooda caadiga ah. Iyadoo kor loo qaadayo keydinta wixii ka sarreeya tixgelinta kale.
Kobaca dhaqaalahu wuxuu ku dhacaa heerar loo qaadan karo inay yihiin kuwo aad khatar u ah. La yaab ma ahan, waa wax aad u badan inay ku jiraan koritaanka xun dhowr jeer bilaha ama xitaa sannadaha sida waddamada soo koraya. Waa qodobka ugu waxyeellada badan ee goobooyin dhaqaale ama dhaqaale.
El shaqo la'aanta way koraysaa markay xaaladdan dhaqaale dhacdo, waddamada qaarkood oo leh boqolleyno aad ugu adkaan kara dowladdu inay qaataan. Gaar ahaan meelaha ay ka jiraan dhibaatooyinka loo arko inay yihiin qaabdhismeed, tusaale ahaan Isbaanishka. Heerarka ka sarreeya 20%, sida ku dhacday xiisaddii dhaqaale ee ugu dambeysay, 2007 iyo 2008.
Qaska ka taagan suuqyada lacagaha Waa mid kale oo ka mid ah waxyaabaha ugu caansan ee ka soo baxa dhacdooyinkan dhibaatada leh ee dhaqaalaha. Kala duwanaanshaha u dhexeeya qiimaha ugu sarreeya iyo kan ugu yar ee isla kulan ganacsi oo ka badnaan kara heerarka 10% ama xitaa xoog badan oo ku saabsan dhaqdhaqaaqa ugu muuqda ee hantidan maaliyadeed.
Shaki kuma jiro in xumbada dhaqaale ay saameyn guud ku yeelan karto bulshada guud ahaan. Tani badanaa waxay sabab u tahay xaqiiqda ah in aan caadi ahayn oo kor u kacay Qiimaha saamiyada qaarkood ama hantida maguurtada ah ayaa kicinaysa fikrad qiyaali ah oo aakhirka burburisa dhaqaalaha. Xumbada dhaqaale ma laha waqti go'an. Haddii kale, taa caksigeeda, waxay socon kartaa dhowr bilood (in kasta oo dhacdadani aysan ahayn mid soo noqnoqota) illaa sannado badan oo baabi'inaysa dhaqaalaha caalamiga ah ama ugu yaraan ummadaha adduunka qaarkood.
Dhinaca kale, waa wax aad u badan in marka aan ka hadlayno dhaq-dhaqaaqa dhaqan ee u eg ay u muuqato inaan si toos ah uga hadlayno dhibaatada ama xumbada guryaha. Laakiin mamnuuciddu waa inaysan qasab ahayn inay isku soo dhowaadaan, ka fog. In kasta oo ay ku soo beegmayaan asal ahaan tan iyo markii ay si fiican u qeexday joogitaanno ay falanqeyn karaan falanqeeyayaasha maaliyadeed ee leh sharaf weyn ee suuqyada. Layaab maleh, asalka goobooyin lacageed badanaa waa mala awaal. Saadaashu waxay ka kooban tahay helitaanka hanti ama shey ujeedkeedu ugu weyn yahay in gadaal looga iibiyo qiimo sare.
Sharciga saadka iyo baahida
Si kastaba xaalku ha ahaadee, waxaa jira calaamado taxane ah oo ku siin kara xoogaa qalab ah tarjumaadda. Sida kiiska gaarka ah in goobooyin maaliyadeed yihiin ifafaale dhaqaale oo ka kooban isku dheelitirnaan xoog leh oo u dhaxeysa saadka iyo baahida. Markay tani dhacdo, waxay ku abuureysaa saameyn aad muhiim ugu ah dhaqaalaha waddan ama heer caalami ah, sidii ku dhacday sannadihii la soo dhaafay dhibaatooyinka dhaqaale. Ma saameynayaan waddan gaar ah, laakiin halkii meelaha dhaqaalaha aad u balaaran, tusaale ahaan waxay ku jiri kartaa aagga euro.
Muuqaal kale oo ay tahay in laga fiirsado hadda laga bilaabo wuxuu ku saleysan yahay xaqiiqda ah, illaa xad, dhaqdhaqaaqyada fiiqan ee dhaqaalaha adduunka waa la odorosi karaa. Sababtoo ah saameyn ahaan, waa koritaan xoog leh oo sicirka ah, oo umuuqan kara mid caadi ah oo duufaan dhaqaale ah, qasab maahan inuu u dhigmo xumbo. Marka laga eego qaabkan, waxay u baahan tahay dhibaatooyin taxane ah a baaritaanka saxda ah waxa ay tahay xumbo astaamahani. Marka laga soo tago astaamaheeda aasaasiga ah taasna waxaa lagu qaldi karaa dhaqdhaqaaqyada kale ee maaliyadeed ee culeyska gaarka ah laakiin taasi ma noqonayso xumbo dhaqaale ama dhaqaale
Si kastaba xaalku ha ahaadee, waa inaad hadda kadib ogaataa in suuqyada saamiyadu ay muujinayaan isbeddello u dhigma goobooyin dhaqaale. Sida laga soo xigtay Dow, abuuraha tusmada New York Dow-Jones, suuqa saamiyada wuxuu soo bandhigayaa seddex isbeddel: isbeddelka asaasiga ah, isbeddelka labaad, iyo isbedelka jaamacadeed. Waa qeybta dambe ee xumbada aan ka hadlaynaa ay ka dhici karto. Maaha wax la yaab leh, waxaa lagu gartaa wax ka sarreeya dhammaan maxaa yeelay gudaha isbedel jaamacadeed waxay u dhigantaa isbedbeddelka sicirka ee la soo saaray isla kalfadhigii suuqa saamiyada.
Dhinaca kale, waa in sidoo kale la ogaadaa arrintan la xiriirta in xaqiiqda ah in suuq dhaqaale uu yahay xad dhaaf ah iyo iibka waxaa lagu soo rogay xoog gaar ah waa mid ka mid ah astaamaha lagu garto goobooyinka noocan ah ama lagu ogaan karo. Meesha ay ka dhacdo hoos u dhac weyn iyo argagaxa maalgashadayaasha, illaa heer ay ku iibin doonaan jagooyinkooda suuqyada sinnaanta xitaa qiimaha ay ku luminayaan lacag badan maalgashigooda.
Sababaha kale ee muuqaalkiisa
Si kastaba ha noqotee, waxaa jira ilo kale oo falanqeyn ah oo sharxaya xaqiiqadan muhiimka ah ama dhacdada dhaqaale. Tusaale ahaan, waa a falanqeyn aan macquul ahayn, oo ku saleysan kaliya dakhliyada la helay xilliyadii ugu dambeeyay ee hantida. Iyadoo aan la tixgelinaynin waqtiga falanqaynta aasaasiga ah ee hantida maaliyadeed. Taasina waxay u horseedi kartaa saameyn aan loo baahnayn dhinaca maalgashadayaasha yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah. Marka laga soo tago tixgelinta kale ee farsamada iyo xitaa aragtida aasaasiga ah.
Halka ay sidoo kale suurtagal tahay in suuqyada la qiimeeyay, iyo jawiga rajo weyn, ay u horseedi karto fikradda maalgashadayaasha in xaaladahan aysan isbadali doonin muddo dheer. Ilaa heer laga abuuro xaalado aan haba yaraatee u roonayn ficillada maalgashadayaasha yaryar iyo kuwa dhexe. Halka ay wax badan ka luminayaan intii ay kasbadeen.
Wadada buuxda ee maqaalka: Dhaqaalaha Dhaqaalaha » Dhaqaalaha guud » Waa maxay xumbada dhaqaale?